FAQs - Shenzhen iftiimeen Technology Co., Ltd.
LCD vs Direct View LED Darbiyada Video: Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Haddii aad tahay suuqa ugu jirta nidaamka muuqaalaynta a, u badan tahay in aad ogaaday in qaab derbiga video iman duwan axsaab muuqaalo, cabbiro iyo teknoolajiyada. Waxa kale oo laga yaabaa in aad dareentay in saarayaasha badan u isticmaalaan magacyo kala duwan ee farsamooyinka isku mid ah iyo codsiyadii is khilaafsan oo ku saabsan taas oo technology qabata ugu fiican.
La fahmi karo, taasi waxay abuuri karaan wax badan oo wareer waayo iibsada. Waayo, dad badan, hal dhibic gaar ah oo wareer waa faraqa u dhaxeeya laba nooc bandhigay caan ah: "LCD" (mararka qaarkood loo yaqaan "LED-LCD") iyo "LED" (mararka qaarkood loo yaqaan "Direct View LED"). In kastoo ay u muuqan kartaa mid ah, LCD iyo LED View Direct jira laba teknoolajiyada bandhigay oo kala duwan leh sifooyinka gaarka ah iyaga u gaar ah iyo macaashka. Sidaas daraaddeed, waa maxay faa'iidooyinka kuwa? Sidee bay u kala duwan yihiin? Haddii aad dhibtoonaya inuu ka jawaabo su'aalaha kuwa, waxaan halkan u joognaa in aan ka caawin!
Waa maxay LCD?
LCD (bandhigay dareere crystal) waa guddi guri nooca bandhigay in uu ahaa mid caan ah oo muddo sanado ah oo labada derbi video iyo macaamilka suuqyada korantada. Fursadda in, aad hore u isticmaali technology LCD dhawr jeer maalintii - waa nooca bandhigay loo isticmaalo casriga ah inta badan, kormeerayaasha computer, iyo screens telefishanka.
darfaha LCD ka kooban yihiin lakabka ah crystal dareere soo galaysa laba xabbadood oo dhalooyinka kala fog. crystal Liquid waa walax in la barwaaqaysan sida dareere ah laakiin u taagoo in la janjeedha kartaa sida kiristaalo. Marka koronto waxaa laga codsadaa in ay kiristaalo dareere, kiristaalo ka baddalo, jidaynayey iftiin u maraan si ay u abuuraan image ah. kiristaalo Liquid ma soo saaraan ay iftiin u gaar ah, sidaas backlights waxaa lagu abaabulaa ka danbeeya galaaska oo daari doona bandhigay. Kokes (dioska- light-emitting) waa nooca ugu badan ee loo isticmaalo backlight maanta, iyo saarayaasha qaar ka mid ah suuq LCDs ay LED-backlit sida "LED-LCD."
LCDs waa dhalaalaya, la awoodi karo, la isku halayn karo, iyo in la siiyo qaab muuqaal fiican. LCD waa technology aad u-xalinta sare ah, sidaas darteed derbiyada LCD video muujiyaan karaa qoraal, sawir, iyo video si faahfaahsan af badan. Faa'iidooyinka waxay ka dhigi LCDs fursad weyn u kala duwan oo ka mid ah codsiyada derbiga video, ka qolalka gacanta ciidamada xarumaha cilmi-baarista ee jaamacadda.
Marka LCDs waa la wada goolad si ay u abuuraan derbiga video ah, bezels (ama dun) waa la arki karo oo u dhexeeya darfahoodii shaqsi. Tani waxaa laga arki karaa sida khasaaro ah marka la barbar LCD noocyada bandhigay xuduud lahayn sida Direct View LED. Si kastaba ha ahaatee, soo saarayaasha ayaa yareeya bezel-width qarnigan kasta oo cusub oo qaab, sidaa darteed waxaad ka heli doontaa in bezels ku LCDs newer badan dareemi yar yihiin.
View Direct LED
Like LCD, Direct View LED (mararka qaarkood kaliya loo yaqaan "LED") waa nooca bandhigay guri-guddi ah oo ku lug leh isticmaalka dioska- light-emitting (Kokes). Si kastaba ha ahaatee, Direct View LED aad u kala duwan ka shaqeeya ka LCD. In View a Direct LED bandhigay, boqolaal ka mid ah uu Kokes waxaa si toos ah dhajinta on guddi, oo ma crystal dareere ama galaas kala fog waxaa loo isticmaalaa. Halkii adeegaya sida backlight ah (sida waxay ku dhex sameeyaan qaab LCD), Kokes ee Direct View LED qaab soo saari images naftooda. LED kasta oo muhiimad ahaan waa buro yar nuurka ayaa shanqarta iftiin midab markii danab gaar ah waxaa laga codsadaa in ay. Rucubood oo uu Kokes casaan, cagaar iyo buluug raaciyaa ee guddiga, abuurista ah pixels midab-buuxa ah loo baahan yahay si loo soo saaro image ah.
Direct View LED mar ahaa nooca bandhigay hoose xal loo isticmaalo inta badan ku soo bandhigay banaanka Rafaa, laakiin horumarinta Kokes ku yar sannadihii la soo dhaafay ayaa go'aan ka badan ee suurtogalka ah. Kuwani guulaha dhawaan ka samaysteen Direct View LED doorasho xiiso cusub derbiyo video indoor.
View Direct LED darfaha leeyihiin bezels lahayn, oo sidaas daraaddeed iyaga waxaa laysugu soo goolad karaan si ay u sameeyaan a gebi ahaanba derbiga video aan xuduud lahayn . Qaab LED sidoo kale waa mid aad u dhalaalaya, lagu kalsoonaan karo, tamarta-hufan, oo ay sax ugu wanaagsan ee midabka iyo raaxayn lahaa heerka nooc kasta bandhigay heli karo maanta. Sifooyinkaasi dhigi Direct View LED doorasho wanaagsan oo baaxad weyn oo calaamado digital iyo codsiyada kale oo ka dalbaday muuqaallada-saameyn sare leh.
Inkasta oo qiimaha la filayaa in ay hoos u sanadada soo socda,-xalinta sare LED derbiyo hadda jira dhowr jeer ka qaalisan LCDs, si technology tani weli waa ka fog macaamiisha ugu badan. Intaa waxaa dheer, xataa-xal ugu sareeya LED qaab weli ma bixin karaan qaraarkii aalladda sare ka LCD la heli karo. Waayo, isticmaalka-kiis u baahan in fiiro gaar ah u faahfaahinta ugu fiican, qaab LCD waxaa laga yaabaa in weli la door bido.
Waxaan rajaynaynaa in aan ka caawiyay daadiyaan iftiin qaar ka mid ah oo ku saabsan farqiga u - iyo faa'iidooyinka caadi ah - ee LCD, oo derbiyadeeda video Direct View LED. Ugu dambayntii, labaduba waa teknoolajiyada bandhigay heer sare ah, iyo codsigaaga gaar ah iyo miisaaniyadda oo keliya go'aan ka gaari kara ikhtiyaarka ugu fiican ee aad.